R.W Khayre oo maanta Jabuuti kula kulmaya Madaxda sare ee dalkaasi – Radio Baidoa
R.W Khayre oo maanta Jabuuti kula kulmaya Madaxda sare ee dalkaasi
By Webmaster	 On Jun 7, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xsan Cali Khyre iyo wafti balaaran oo uu hogaaminayo ayaa xalay gaaray magaaladda Jabuuti ee D-Jabuuti, waxaana goroonka diyaaradaha ee dalkaas ku soo dhaweeyay Ra’iisul Wasaaaraha Jabuuti iyo qaar ka mid mas’uuliyiinta dalka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ay la socdeen wafti ay ka mid yihiin Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad, Wasiirka Boostadda iyo Isgaarsiinta Eng Cabdi Canshuur Xasan, Wasiir Dawlaha Wasaaradda Gaashaandhiga Mudane Maxamed Cali Xagaa iyo mus’uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda, ayaa qorshaha waxa uu yahay in booqasho labo cisho ah ay ku joogaan magaaladda Jabuuti.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa maanta kulan la qaadan doona Madaxwaynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele, waxayna ka wada hadli doonaan sidii loo horumarin lahaa xariirka wadashaqeynayd ee labada dal iyo habka ugu wanaagsan ee loo dar-dargalin karo howlaha horumarineed ee ay dawladda Jabuuti ka wado gudaha Soomaaliya.
“Ra’isul Wasaaraha ayaa caawa booqasho ku yimid dalka Jabuuti, wuxuuna ka jawaabayay marti qaad hada kahor Ra’iisul Wasaaraha dalka Jabuuti u soo diray, sidoo kale wuxuu la kulmi doonaa Ra’iisul Wasaaaraha dalkan iyo Madaxweynaha Jabuuti, waxay ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ka dhaxeeya.” Ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Tahriibayaal ka baxay Soomaaliya oo ku dhintay xeebaha dalka Yemen
Al Shabaab oo weeraray Deynuunay
DFS Oo Shaacisay Kiisas Hor Leh Oo Cudurka COVID-19 Ah
Qarax Lagu Le’day Oo Ka Dhacay Iskuul Diinta Lagu Barto
James Swan Iyo Wafdi La Socday Oo Gaaray Dhuusamareeb